Iindlela ezi-5 zokucwangcisa ingqokelela yakho yeencwadi | IBezzia
UMaria vazquez | 04/05/2021 12:00 | Ikhaya
Abo kuthi bonwabele ukufunda bathambekele ekubhaleni phantsi izihloko ezisazokufundwa kuluhlu. Uluhlu olukhula kwinqanaba lokumangalisa esingenakumelana nalo. Asizithengi zonke izihloko ezikuluhlu, ezikude nayo, kodwa siphela siqokelela ekhaya a ingqokelela ebalulekileyo yeencwadi Kuya kufuneka uququzelele ngandlela thile.
Yiba nelayibrari apho ukwazi ukubeka khona bonke liphupha labaninzi. Inyaniso, nangona kunjalo, inyanzela ukuba sizisasaze kumagumbi ahlukeneyo. Nangona kunjalo gcina ucwangco kwingqokelela yethu Kungenzeka ngokusebenzisa enye yeefomula ezintlanu esizicebisayo namhlanje. Ngaba siza kuqala?
Iincwadi zihlala zithatha indawo efanelekileyo emakhayeni ethu, yiyo loo nto kwabaninzi kubaluleke kakhulu ukuba indlela ezilungelelaniswe ngayo iphendule kuzo zombini iindlela ezifanelekileyo kunye nobuhle. Ukudibanisa zombini kunzima kodwa akunakwenzeka. Nokuba yeyiphi indlela okhetha ukuyenza, le yingcebiso yethu yokuqala: gcina ishelufu kwi Indawo ekhethiweyo yeencwadi ezisandula ukufika, ezo ungakhange uzifunde.
2 Ngolandelelwano lwealfabhethi
Xa iintlobo ezahlukeneyo zisetyenziswa ekhayeni (izincoko, iintsomi, iibhayografi, iimemo, imidlalo yeqonga, imibongo), ukulungiselela iincwadi ngokwalo mgaqo kuhlala kuyinto efanelekileyo. Nje ukuba uhlelwe luhlobo, ukongeza, ukuba inani lemiqulu linobubele, ungasoloko ujonga kamva ukuba uzilungiselele ngokwe-alfabhethi okanye ngokulandelelana. Iindlela ezimbini zokubaququzelela ngezibonelelo zabo ezihambelana noko.
Ukuhlela ilayibrari ngokwe-alfabhethi yenye yezona zikhetho zithandwayo. Ngaba ufunda ikakhulu iintsomi? Ukuba kukho uhlobo oluphambili ekuqokeleleni kwakho incwadi, ungacwangcisa oku kwivenkile yeencwadi ephambili ukuthathela ingqalelo igama lokuqala lababhali. Ungazifumana ngokulula iincwadi zombhali ozithandayo.
Ngaba ukufumanisa kunzima ukukhumbula izihloko kunye nababhali bemisebenzi oyifundayo? Ukuba, njengam kwiinyanga ezimbini emva kokuzifunda, ukufumanisa kunzima nokukhumbula impikiswano, le isenokungabi yeyona ndlela ilungileyo kuwe. Kwimeko yakho nakwam, indlela ebonakalayo ngakumbi inokubakho ngakumbi.
Ukuba awukhumbuli izihloko okanye ababhali kodwa ukuba awuzikhumbuli iimpawu zobuhle bencwadi Njengobungqindilili, umbala womqolo okanye isiciko, iindlela ezibonakalayo zentlangano zinokuba luncedo olukhulu. Ukuzihlela ngomshicileli, umzekelo, kunokukunceda ufumane incwadi ngokukhawuleza.
Kwiimeko ezininzi, kulula ukufumanisa ukuba yeyiphi incwadi yomshicileli eyeyakhe ngokujonga nje emqolo. Kuyinto ephawuleka kakhulu, umzekelo, bomvu ingqokelela yePeriférica. Imivumbo eorenji okanye ebomvu emqolo omnyama wendlu yokupapasha iAcantilado okanye ilogo yengqokelela yeAnagrama.
Le ndlela, ukongeza ekusebenzeni kwayo, isivumela ukuba siququzelele ithala leencwadi ukuze iincwadi ezinempawu ezifanayo zidibane. Umkhwa osinika i umbono olungeleleneyo nonomtsalanengokubanzi ukusuka kwilayibrari yethu.
Indlela ene Ubukho obuninzi okwangoku kwi-InstagramInethiwekhi apho yonke into ibonakala ngathi ikhathalelwe ngamehlo, kukucwangcisa iincwadi ngombala. Ngaba iyasebenza? Ukuba, njengam, unememori eguqukayo, inokuba lide nje ukuba ingqokelela yeencwadi incinci.
Asinakuyihoya into yokuba iincwadi ezinemiqolo emnyama namhlophe zezona zininzi. Kuyinyani ukuba baninzi abapapashi, ngakumbi abatsha kunye / okanye abazimeleyo, ababheja ngombala kodwa kunqabile ukufumana, umzekelo, iincwadi ezinombala omfusa okanye oluhlaza, ukunika imizekelo embalwa. Ke ukuba umbono wevenkile yakho yeencwadi iya kuba ntle kodwa mhlawumbi ingalingani kwaye ngekhe kubekho nto ingako onokuyenza ngayo.
Ngaba uyithandile incwadi? Ungayicebisa komnye umntu? Imvakalelo umntu anayo yokufunda okuthile Yimalini ekufuneka uyibuyisele kwithala leencwadi inokuba yindlela yokuhlela esebenzayo njengangaphambili. Kutheni ungazicwangcisi iincwadi zakho ngokwamanqanaba amathathu? Ezo uzithandayo okanye ofunda nazo zikuphawule kwelinye icala. Kwelinye, ezo ukonwabele kodwa unokucebisa kuphela kubantu abathile. Kwaye okokugqibela, ezo ungazithandanga kwaye onokuthi uzithengise okanye uzinike umntu onokuzonwabela.
Ngaba usebenzisa naziphi na iindlela zokucwangcisa ingqokelela yakho yeencwadi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Iindlela ezi-5 zokucwangcisa ingqokelela yakho yeencwadi